काभ्रेमा औद्योगिक क्षेत्र आवश्यक छ
– भर्खरै नेपाल उद्योग वाणिज्य संघको केन्द्रीय सदस्यमा विजयी हुनुभएको छ, तपाईको एजेण्डाका बारेमा बताइदिनुहोस् न ?
सर्वप्रथम नववर्ष २०७४ को सबैमा शुभकामना दिन चाहन्छु । यो वर्ष हामीले आर्थिक समृद्धिको रुपमा नारा अगाडि सारेका छौं । संघको ५१ औं अधिवेशनबाट हामीले महिला अध्यक्षको रुपमा भवानी राणालाई पाएका छौं । उहाँको जुन लक्ष्य थियो त्यो लक्ष्य आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हो । देशमा निर्वाचन हुन लागेको छ । निर्वाचन पनि पूर्णरुपमा सम्पन्न होस् । उद्योगी व्यवसायीहरु पनि फस्टाउन सकून् । नयाँ औद्योगिक नीतिहरु आएको छ । नेपालमै औद्योगिक क्रान्ति हुन सकोस् । युवाहरुलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सकोस् ।
एजेण्डाका विषयमा भन्नुपर्दा हामीले धेरै कुराहरु राखेका छैनौं यसपालि । हामी निर्वाचन अघि हुने घोषणा सभामा पनि केही राखेका छैनौं । किनभने भोलिका दिनमा काम गर्न गाह्रो हुन्छ । हामीले २–४ वटा मात्र एजेण्डाहरु राखेका छौं । हामी सबै नेतृत्ववर्गको लक्ष्यअनुसार अगाडि बढ्ने हो । महासंघले गर्ने आर्थिक समृद्धिका जति पनि कुराहरु हुन्छन्, यसमा सम्पूर्ण व्यवसायीलाई समेटेर सम्पूर्ण जनताको आर्थिक उन्नति गर्नको लागि महासंघबाट हुने कामहरु हुन्छन् त्यसको लागि हाम्रो भूमिका सहयोग र साथ निरन्तर रुपमा रहनेछ । र राज्यका कुराहरु उहाँहरुसँग मिलेर हामी अगाडि बढ्नेछौं । हाम्रो जिल्ला नगरबाट गएका कारण जिल्ला नगरमा रहेका सम्पूर्ण मध्यम व्यापारी व्यवसायीहरुको समस्या भनेको त्बह, ख्बत राजस्वका कुराहरु रहेका छन् । त्यसले गर्दा हिजोका दिनदेखि रहेको मिक्सम्याचका कुराहरु अन्त्य गर्नका लागि अहिले जति पनि अन्डरविलिङका कुराहरु भैराखेका छन् यसलाई हामीले न्यून गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौं । यसले गर्दा भोलिका दिनमा जतिपनि अहिले महासंघमा उद्योगी व्यवसायीहरु छन्, उहाँहरुले यो काम गरिदिनुभयो भनेदेखि हामी बीचमा बसेर काम गर्ने मध्यमवगीय व्यवसायी तथा जिल्लामा बसेर व्यापार गर्ने व्यापारीहरुले दुईवटा हिसाबकिताबहरु राख्नुपर्नेछैन । यो मुख्य उद्घोष रहेको छ । यो एउटा मात्र समस्या समाधान गर्न सक्यौं भनेदेखि हामी देशभरीका सम्पूर्ण उद्यागी व्यवसायीहरु निर्धक्कका साथ काम गर्न सक्छौं । हामी कर्मचारी मित्रहरुलाई पनि दोष दिन चाहँदैनौं । किनभने हामीले कर्मचारी मित्रहरुलाई अनुगमनमा आयो भनेर दोष दिइराख्नुभन्दा पनि हामीले गर्नुपर्ने कुरा के हो ? हामी सच्चिनु आवश्यक छ । अर्काेकुरा हामी यो पटक लगभग ६४–६५ जिल्लाहरु भ्रमण ग¥यौं । ९०–९५ वटा उद्योग वाणिज्य संघहरुमा भ्रमण ग¥यौं । शहरीक्षेत्रमा भेगमा रहेका उद्योग वाणिज्य संघहरु छन् उनीहरु सक्षम छन्, आफ्नै भवन छन् र क श्रेणीका छन् भने ख र ग श्रेणीका उद्योग वाणिज्य संघहरु अहिलेसम्म पनि भवन बनाउन नसकिरहेको अवस्था छ । यसको लागि आर्थिक सबलीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी अध्यक्षमार्फत लाग्नेछौं । हामीसँग जतिपनि सक्षम संस्थाहरु छन् त्योभन्दा पनि विगतमा रहेका उद्योग वाणिज्य संघलाई पनि सँगै लाने प्रयासमा जुटेका छौं । जतिपनि आम्दानीका कुराहरु छन् त्यो आम्दानीबाट केही रकम उक्त उद्योग वाणिज्य संघहरुलाई दिएर आर्थिक सबलीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो राष्ट्रिय स्तरको एजेण्डा रहेको छ ।
– काभ्रेमा रहेका समस्याहरुलाई केन्द्रीयस्तरमा कसरी समन्वय गर्नुहुन्छ ?
महासंघका कार्यक्रमहरु जिल्ला–जिल्लामा रहेका हुन्छन् । अहिले नयाँ कार्यक्रमहरु पनि आएका छन् । ओपीओबी कार्यक्रमको हामी अहिले चौथो वर्षमा छौं । ओबीओपी भनेको दुधको क्षेत्रमा काम गर्ने हो । दुधलाई कसरी विविधीकरण गर्नुपर्छ भन्ने विषयको कार्यक्रम हो । यसमा दुधलाई कसरी स्वच्छ र सफा दुध कसरी बढी उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने पनि हो । यसपालि हामीले नयाँ एजेण्डा राखेका छौं । त्यो हो मिट प्रोसेसिङ । यसअन्तर्गत मासु बाहिर नबेची मासुलाई उद्योगको रुपमा स्थापना गर्न लागेका छौं । जुनकुरा पशुपन्छी मन्त्रालयमा फाइल पेश भैसकेको छ । बजेट मात्र आउन बाँकी छ । हामीले काठमाडौं र सेरोफेरोका बजारलाई लक्षित गरेर यो उद्योग संचालनमा ल्याउन लागेको हो । अर्कोकुरा १५ वटा उद्योगहरु महासंघबाट नमूना उद्योगको रुपमा उद्योग मन्त्रालयमा पेश भएको छ । १५ वटा उद्योग मध्ये १ वटा उद्योग काभ्रे जिल्लामा ल्याउने पहल रहनेछ । भोलिका दिनहरुमा नयाँ नयाँ प्रोजेक्टहरु आएभने हामी केन्द्रमा गैसकेपछि आफ्नो जिल्ला साथसाथै अरु जिल्लालाई सेक्टर अनुसार प्राथमिकता दिनेछौं त्यसको लागि हामीले नेतृत्ववर्गलाई सुसूचित गराउने कामहरु गर्छाैं ।
– युवाहरु विदेशिने क्रम जारी छ, ति युवाहरुलाई रोक्न केही योजनाहरु छन् ?
जहाँसम्म लाग्छ युवाहरुको बानी बिग्रिसकेको छ । किनभने युवाहरुमा विदेशिने मोह बढ्दो छ । युवाहरुमा यहाँ कमाएको पैसा नबच्ने र विदेशमा गएर कमाएको पैसा बच्ने भन्ने जुन सोच रहेको छ । अनि आफ्नो साथीहरु सबै विदेश गएको हुँदा आफू पनि विदेश जानैपर्छ भन्ने मनस्थिति बनेको छ । यी कुराहरुलाई एकैचोटी निर्मुल गर्न कठिनै छ । हामीले विस्तारै प्रयास गर्ने हो । अर्काेकुरा उद्योग वृद्धि भएभने रोजगारको सिर्जना हुन्छ । विदेशमा दिने तलब सुविधा यही प्रदान गरिएको खण्डमा केही हदसम्म युवाहरु विदेश जानबाट रोक्छन् । त्यस्तै व्यवसायिक रुपमा अघि बढ्ने हो भने सरकारले जुन नीति ल्याएको छ कृषि लगायत अन्य व्यवसायहरु गर्नको लागि सरकारी जग्गाहरु भाडामा दिने कुराहरु छन् यसमा पनि महासंघले कुराहरु अगाडि बढाउनुपर्छ । सरकारले युवाहरुका लागि ल्याएका योजनाहरुलाई तल्लोस्तरसम्म पु¥याएको खण्डमा पनि युवाहरु पलायन हुनबाट रोकिन्छ ।
– सेज पाँचखालको कार्यक्रम सुस्त गतिमा बढेको छ, काभ्रेमा अरु कुनै योजनाहरु छन् ?
हाम्रो पालादेखि सुरुभएको सेज कार्यक्रम छ । यसको लागि जग्गाहरु लिइसकेको छ । सातवटा प्रदेशमा सेजको अवधारणा अगाडि बढिसकेको छ । हाम्रो काम हुँदाहुँदै चाइनाको नाका बन्द भयो । त्यसले सेजलाई ठूलो असर परेको छ । किनभने सेज भनेको त्यो औद्योगिक क्षेत्र हो त्यसमा निर्यात गर्ने ८० प्रतिशत उद्योग हुन्छ । २० प्रतिशत स्थानीय उपभोग गर्ने उद्योग दिइन्छ । भैरहवामा निर्मित उद्योगहरु भारतको लागि लक्षित गरिएर निर्माण गरिएको उद्योगहरु हुन् भने पाँचखालको सेज उद्योग चाइनाको लागि लक्षित गरिएको हो । यसको लागि यि कार्यक्रमहरु निरन्तररुपमा अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । किनभने निर्यात नगरी यो देशमा आर्थिक उन्नति हुँदैन । अर्काे हामी के भन्न चाहन्छौं भने काभ्रे जिल्लामा उद्योगिक क्षेत्रको अति आवश्यक छ । किनभने हिजोको दिनमा नाकाबन्दी भुकम्प सबै व्यहोरेका छन् जनताहरुले । दैनिक उपभोग्य देखि लिएर अन्य सामग्रीहरुमा लगभग ६० प्रतिशत उपत्यका र उपत्यका सेरोफेरोका जिल्लाहरुमा खपत हुन्छ भने लगभग ५० प्रतिशत दैनिक उपभोग्यका सामग्रीहरु खपत हुन्छन् भने त्यसले गर्दा औद्योगिक क्षेत्रको आवश्यकता छ । काभ्रे जिल्ला एउटा उपत्यका सँगैको क्षेत्र भएको कारण यहाँ उद्योगको स्थापना हुनु आवश्यक छ । आफ्नै ठाउँमा उद्योगहरु स्थापना भए भने त्यहाँ रोजगारको सिर्जना हुन्छ । यसले गर्दा आर्थिक क्रान्तिमा सहयोग पु¥याउँछ ।
– संघीय संरचनामा व्यवसायीहरुले दोहोरो कर तिर्नुपर्ने कुराको दुविधाहरु के कति छन् ?
द्धिविधाको कुरा गर्नुपर्दा अहिले नै स्पष्टरुपमा नीति नियमहरु आएको छैन । मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो यो ३ नं. प्रदेश छ भने विदेशबाट आउने सामानहरु २ नं. प्रदेश भएर पनि आउन सक्छ । त्यसले गर्दा २ नं. प्रदेशले लिने कि नलिने कुराहरु । उसको ठाउँबाट कारणले गर्दाखेरी । यस विषयमा राम्रो सिस्टम बनाउनुपर्छ । यसले गर्दा भोलि एउटा प्रदेशबाट अर्काे प्रदेशमा आउने क्रममा हरेक कुराहरु लुजहरु हुनसक्छ । यसले गर्दा आर्थिक चलखेल बढी हुनसक्छ । मेरो बिचारमा एकैठाउँबाट लिन पाए राम्रो हुन्छ । यसले हिसाबकिताबहरु पनि पारदर्शीरुपमा नै हुन्छन् । यसबाट दोहोरो तेहोरो झन्झट पनि हुँदैन । यसविषयमा एकद्धार नीति अपनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ । सरकारले यस विषयमा कस्तो नीतिहरु ल्याउँछ यस विषयमा हामी पहल गर्नेछौं ।
– काभ्रेलाई कृषि क्षेत्रमा समृद्ध बनाउन उद्योग वाणिज्य संघले कस्तो भूमिका खेल्छ ?
हालसम्म हरेक क्षेत्रमा भैरहेको कामहरु जति छन् त्यो सबै पब्लिक रुपमै भएका छन् । यो कुरा निर्वाचन पछि राज्यले गर्नुपर्ने हो । काभ्रे जिल्ला कृषिमा १ नं. क्षेत्र हो । हामी कृषिमा धेरै कुराहरु गर्न सक्छौं । तरपनि केही गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । जबसम्म सरकारले सरकारी जग्गा भाडामा दिएर व्यवसायिक कृषि गर्न पब्लिकलाई दिइँदैन तबसम्म यो सम्भव छैन । अहिले पनि जति पनि कृषियोग्य जमिनहरु छन् ती सबै ठाउँमा भवनहरु निर्माण भएका छन् । समथर भुभागमा कृषि व्यवसाय गर्नका लागि उपयुक्त हुन्छ । यसका लागि सरकारले नै चासो दिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । उद्योग वाणिज्य संघले सरकारलाई अनुरोध र घच्घचाउने मात्र हो ।
– उद्योग व्यवसाय गर्नको लागि सहुलियत ऋणको सुविधा पाउनै कठिन छ भनिन्छ नि ?
हामी उद्योगी व्यवसायी साथीहरुलाई के भनिराखेका छौं भनेदेखि के काम गर्ने हो त्यसमा दत्तचित्त भएर लाग्नुस् । व्यापार व्यवसाय गर्न त्यति ठूलो समस्या छैन । हाम्रो लक्ष्य भनेको काभ्रे जिल्लालाई औद्योगिक क्षेत्रमा लानुपर्छ भन्ने हो । यसमा हामीले निरन्तर रुपमा कुरा उठाइरहेका छौं । साथीहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने उद्योग गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यस विषयमा अध्ययन गर्नुहोस्, शिक्षाहरु हासिल गर्नुहोस्, । पूर्णरुपमा ज्ञान प्राप्त भएपछि मात्र उद्योगमा हात हाल्नु अनुरोध गर्दछु । बैंकको कुरा गर्दा बैंकले हामीलाई एउटा प्रोजेक्ट लोन दिनैपर्छ । १ करोड ऋण लिनको लागि ३–४ करोडको धितो चाहिन्छ । त्यसले गर्दा पनि युवाहरुले उद्योगमा हात हाल्न सकिरहेका छैनन् । बैंकले पनि विश्वासयोग्य मानिसहरुलाई बिना धितो अहिले पनि ऋणहरु दिइरहेका छन् । बैंकले पनि कामको मूल्यांकन गरेर ऋण प्रवाह गरेको छैन मान्छे हेरेर ऋण प्रदान गरिरहेको छ । यसले गर्दा हाम्रो महासंघको नयाँ नीति अन्तर्गत आर्थिक समृद्धि हाम्रो लक्ष्यको लागि यो कुरा पनि फोकस हुनेछ ।
सुरुमा मैले प्रवेश गरेको क्षेत्र भनेको यातायात क्षेत्र हो । त्यहाँ रहँदा मेरो पहलमा थुप्रै सुधारका कार्यहरु गरें । पब्लिकको सेवा सुविधाको लागि नयाँ कार्यक्रमहरु ल्याएँ । राम्रा कामहरु गरेबापत यातायात व्यवसायी महासंघबाट सम्मान पनि पाएँ । त्यसपछि नेपाल परिवार नियोजन संघमा आबद्ध भएँ । खारेज हुने अवस्थामा पुगिसकेको संघलाई पुर्नजीवित तुल्याउन सफल भयौं । त्यसपछि उद्योग वाणिज्य संघ काभ्रेमा प्रवेश भएँ । महाभुकम्पमा उद्योग वाणिज्य संघबाट उल्लेखनीय भूमिका खेल्यो । त्यसपछि नाकाबन्दीको मारमा रहेका जनताहरुलाई सेवा सुविधा पु¥याउन गाडीमा तेलको अभाव हुन दिएनौं । नमूना शहरको रुपमा चिनाउन बनेपामा ठाउँ–ठाउँमा सिसी क्यामेरा तथा सडक बत्तीको जडान ग¥यौं । हामी सामाजिक कामहरु गर्न रुचाउँछौं । यसमा सबैको साथ र सहयोग प्राप्त भरहेको छ । अन्तमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा विजयी गराउन सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । साथै आउँदो वैशाख ३१ गतेको निर्वाचनलाई निर्वाचनको रुपमा नलिई आर्थिक क्रान्ति र देश विकासको रुपमा नेतृत्व वर्गले लिनुहुनेछ भन्ने विश्वास छ ।
प्रकाशित मिति: 19 April, 2017